Ọrụ Arduino - Ikkaro
Arduino ọ bụ usoro nke Akụrụngwa n'efu, flagship nke Open Hardware. Na-amasị m na-eche banyere ihe arduino osisi dịka ọ dị n'ụbụrụ na-achịkwa ọrụ anyị niile. N'ezie ọ bụ microcontroller nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta na ọtụtụ ihe mmetụta dị iche iche iji mata ụwa ma mepụta ihe anyị na ngwaọrụ anyị.
Ruo ugbu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe yiri ya, anyị ga-ewere PIC, kaadị mmemme wee gbakọta sekit anyị. Arduino, ka anyị kwuo na ọ tozuola ya ma ekele nye nnukwu obodo dị na gburugburu yana akwụkwọ maka onye ọ bụla na puku kwuru puku, iri puku kwuru iri puku na puku iri puku ise rụzuru ma dịnụ iji wuo, melite ma mụta ihe, ọ chụpụla ndị ochie mmemme, ọkachasị n'etiti ndị kasị novice. Arduino ekwela ka ọtụtụ ndị na-agba elektrọnik dijitalụ banye.
Anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ọrụ anyị ga - eji Arduino mee maka nnwale ụlọ anyị na nke anyị Mee N'onwe Gị oru ngo
Ke ibuotikọ emi m ga-akọwa otú e si dozie a nkịtị njehie na Arduino: avrdude: ser_open (): ike imeghe ngwaọrụ «/ dev / ttyACM0»: Ikike… Nọgidenụ na-agụ ihe
Starter Kit ka Arduino Super Starter Kit UNO R3 Project nke Elegoo
Daysbọchị ole na ole gara aga Azụrụ m Arduino Starter Kit, site na ika Elegoo, a na-enye € 30. Enwere m ihe mmetụta ole na ole na akụrụngwa m na-azụ, mana m na-efu ọtụtụ n'ime ndị a na-enye na Kit ma ọ dị ka ezigbo echiche ịzụta ya wee hụ ma ụdị ngwaahịa a ọ bara uru. Ha nwere 4 Starter ngwa iwu, nke bụ isi bụ Super Starter nke bụ kit m zụtara na mgbe ahụ abụọ ọzọ nwere ọbụna karịa components, mana eziokwu bụ na m weere nke a n'ihi onyinye ahụ. Achọrọ m iwere nke nwere ugboro redio.
Gụ ụfọdụ nyocha nke mbadamba Elegoo ha na-ekwu okwu nke ọma, mana enwere ndị na-eme mkpesa banyere ndakọrịta nke bọọdụ ahụ bụ otu mmepụta nke Arduino UNO R3. Ahụmahụ m dị ezigbo mma, efere ahụ arụ ọrụ nke ọma, dakọtara na Arduino IDE n'emeghị ihe ọ bụla, gbanye ma kpọọ. Ebuola m ya kpuo, Emewo m mgbanwe ụfọdụ. Agbalịrị m ụfọdụ ihe ngwa ngwa ngwa ngwa na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma (Ule na Ubuntu 16.10 na kubuntu 17.04)
Arduino ịba ụba na njikwa oge
Abụghị m ọkachamara Arduino, n'agbanyeghị na enwere efere ahụ ruo ogologo oge anaghị m enyocha. Oge m ji ya dị ka ngwa ọrụ na-edegharị na koodu pasting nke emepụtara mana na-enweghị nnukwu mmasị n'ịmụta etu o si arụ ọrụ mana naanị ebum n'uche ime ka ọ rụọ ọrụ ma baara m uru. N'oge ekeresimesi a, ejiri ụfọdụ LEDs na ihe mmetụta HC-SR04 ultrasound lelee usoro ọmụmụ Jizọs. M kwụsịrị ileru anya ihe a ga-eme.
Naanị m chọrọ ime ihe dị iche iche na LED abụọ site na otu mgbaàmà. Choo. Ebupụrụ m ngwa ngwa n'ihe m chere ga-abụ otu n'ime njedebe izizi ị ga-ahụ mgbe ịmalitere mmekọrịta na Arduino. Youkwesighi ime ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya. Naanị m na-ekwu maka ụfọdụ LEDs, ị ghọtara na ịnweghị ike ime ihe ị chọrọ n'ụzọ ziri ezi.
Ka anyị mee ka o doo anya site na mmalite multitasking adịghị na Arduino, A gaghị arụ ọrụ abụọ n'otu oge. Mana enwere usoro iji kpọọ oku ngwa ngwa nke na ha yiri ka ha na-arụ ọrụ n'otu oge.
Ana m agwa ikpe ahụ n'ụzọ zuru ezu karị. N'oge Krismas, m guzobere Ebe A Na-amụ Banyere Ọmụmụ Kraịst ma chọọ ka ọkụ ụfọdụ gafere n'ememme ya ruo mgbe ụmụ m nwanyị bịaruru nso. Ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya. Achọrọ m alaka abụọ nke ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ dị iche na ụkpụrụ nke ihe mmetụta dị nso.
Otu esi eji Arduino eme robot arụrụ n'ụlọ
N’isiokwu a anyị ga-amụta etu esi arụ a obere robot arụrụ n'ụlọ nke Arduino na-achịkwa. Ebumnuche nke robot ga-abụ iji zere ihe mgbochi site na ihe mmetụta nke ultrasound, mgbe ọ ruru ihe mgbochi ọ ga-eleba anya n'akụkụ abụọ wee chọpụta nhọrọ kachasị mma iji gaa n'ihu njem ya.
N'ime akụkụ nke mbụ a, anyị ga-elekwasị anya n'ịrụ igwe robot, na-achịkọta akụkụ yana ijikọ.
Njikwa Servomotor na PWM na Arduino
Anyị egosiworị na blọọgụ Arduino (https://www.ikkaro.com/Tutoriales-basicos-arduino) na eziokwu pụtara n'ọtụtụ ọrụ gụnyere nke a (https://www.ikkaro.com/node/529)
Ugbu a, ka anyị gakwuo n’ihu modulate n'ókè site usu obosara (PWM), nke a nwere ike iji ihe atụ iji jikwaa servomotors dị ka ndị a ebe a (https://www.ikkaro.com/node/741) ma ọ bụ rgb leds n'etiti ndị ọzọ. Maka ndị na-amaghị ihe PWM bụ, ọ bụ mgbanwe ụda olu emere na mgbaama yana nke na - ebufe “ozi site na ọwa nkwukọrịta ma ọ bụ iji chịkwaa oke ike ezigara na ibu” (Wikipedia)
Gịnị bụ Arduino
M na a na-achọ oru ngo mere na Arduino, ya mere achọrọ m ịmata ihe nke a Arduino achọkwara m ntakịrị ihe ọmụma na ụgbụ.
Arduino bụ ihe ngwaike ngwanrọ na-emeghe emeghe dabere na bọọdụ I / O dị mfe yana gburugburu ebe mmepe na-emejuputa asụsụ mmemme nhazi / wiring. Enwere ike iji Arduino mepụta ihe ndị kwurula kwurula ma ọ bụ nwee ike jikọta ya na ngwanrọ kọmputa